Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Ishishini lokuhamba ekugqibeleni lidibana kwakhona kwi-WTM London
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • iintlanganiso • iindaba • abantu • Tourism • Iindaba zeWired Travel • Iindaba eziHlumayo zase-UK
Eyona ndibano inkulu yabasebenzi bokhenketho kwihlabathi ukusukela oko waqala ubhubhane lelona qonga lifanelekileyo lokuchacha ngo-2022.
Umboniso we-WTM waseLondon ubuyile ekugqibeleni!
Ukuvulwa kwe-WTM yaseLondon ngokusesikweni kunye no-HE Ahmed Al Khateeb, uMphathiswa wezoKhenketho eSaudi Arabia; uFahd Hammidaddin, iGosa eliyiNtloko yeSigqeba seGunyabantu lezoKhenketho laseSaudi; U-Hugh Jones wabiza i-CEO kwi-RX Global kunye ne-Princess Haifa AI Saud, uMncedisi woMphathiswa wezoKhenketho eSaudi Arabia.
Usuku lokuqala lomboniso lwamkele ababonisi abavela kumazwe angaphezu kwe-100 kunye nemimandla, ngaphezu kwe-6,000 yabathengi ababhalise kwangaphambili abavela kumazwe e-142 kunye neengcali zokuhamba ezivela kwihlabathi lonke.
Ukhenketho oluthatha uxanduva lwalungowona mxholo wosuku. Njengomnyhadala ohamba phambili wehlabathi kushishino lokuhamba, iWTM yaseLondon iye yalwela unobangela wokhenketho olunenkathalo kwaye iWTM Responsible Tourism Awards yonyaka ibhiyozele okona kulungileyo kokuhamba kuzo zonke iindidi – uluhlu lwabaphumeleleyo luya kukhutshwa ngale ntsasa.
Abantu abancinci baya ngokuya beguqukela kwiiarhente zokuhamba ukuze babhukishe iiholide ngenxa yokubhideka kunye neengxaki ezibonwe ngexesha lo bhubhani, ngokweNgxelo yoShishino lweWTM.
Uphando lwayo lwabathengi be-1,000 lufumene i-22% yabaneminyaka engama-35-44 bathi banokuthi basebenzise i-arhente, kunye ne-21% yabaneminyaka eyi-22-24 kunye ne-20% yabaneminyaka eyi-18 ukuya kwi-21.
Intatheli yezohambo ehlonitshwayo uSimon Calder ubonise ezi kunye nezinye ezininzi ezifunyenweyo eziphuma kwiNgxelo yoShishino lweWTM ngosuku lokuqala lomsitho.
Le ngxelo ikwafumanise ukuba abakhenkethi banethuba eliphindwe kane lokubhukisha iphakheji kunokuhlala kuqoqosho lokwabelana kulo nyaka uzayo.
Phantse isinye kwisithathu (32%) sabo bacinga ngeeholide zaphesheya ngo-2022 ngabona banokuthi babhukishe iphakheji yeholide, xa kuthelekiswa ne-8% abaza kubhukisha ngendawo yoqoqosho yokwabelana, efana no-Airbnb.
UCalder uxelele iindwendwe oku: “Yonke imihla ndifumana izikhalazo kubantu abazenzele bona uhambo okanye ngokusebenzisa enye yee-arhente zokundwendwela ezikwi-intanethi ezingakhathalelwa kangako.
“Ukusebenzisa inkampani yephakheji kungcono kwaye ukusebenzisa iarhente yokuhamba ephilayo kuthetha ukuba abayi kukushiya uxinezelekile. Konke oku kubhideka kunyanzela abantu ukuba basebenzise iiarhente zokuhamba. ”
Xa abathengi babuzwa malunga nokuba bangathanda ukuya phi, eyona ndawo iphambili yayiyiSpain, ilandelwa zezinye iintandokazi zemveli zaseYurophu ezinje ngeFrance, i-Italiya neGrisi, kunye ne-US-eya kuphinda ivulele abakhenkethi baseBritane nge-8 kaNovemba emva kokuba bephumile kwimida ukusukela oko. Matshi 2020.
Ingxelo ikwaveze ukuba uninzi lweengcali zorhwebo ezingama-700 ezibuzwayo malunga nengxelo zilindele ukuba ukuthengisa kuka-2022 kuhambelane okanye kubethe i-2019.
Ngaphaya koko, phantse i-60% yabaphathi bohambo bakholelwa ukuba uzinzo lube yeyona nto iphambili kwishishini.
UCalder uphinde wabamba ingxoxo yephaneli ukuze kuxoxwe ngemiba ephakanyiswe luphando.
UJohn Strickland, ingcali yezomoya ye-WTM, uthe abathwali bexabiso eliphantsi njengeRyanair kunye neWizz Air babona amanani angcono wendlela kodwa iinqwelomoya ezinjengeBritish Airways kunye neVirgin Atlantic, ezixhomekeke kwiindlela ezihamba ixesha elide kunye nezokuwela iAtlantiki, zithatha ixesha elide ukuchacha.
Ucaphule uqikelelo lwe-IATA oluthe itrafikhi ayizukubuyela kumanqanaba angaphambi kobhubhane kude kube ngu-2024.
Kwakhona, akacingi ukuba uhambo lweshishini luya kubuyela umva ngendlela iimarike ezenze ngayo ukuzonwabisa kunye nokutyelela abahlobo kunye nezalamane.
Nangona kunjalo, uTracey Halliwell, uMlawuli wezoKhenketho, iiNdibano kunye neMisitho emikhulu eLondon & Partners, uthe kukho umbhobho "oqinileyo" wokhenketho lwezoshishino kunye neziganeko ezinkulu kwikomkhulu.
“Ndinethemba lanaphakade ukuba iLondon iza kubuyela kwisimo sayo esiphakamileyo,” utshilo.
Ukuhamba ngokuzonwabisa kuya kugqithisa nakuphi na ukusilela kukhenketho lwezoshishino kuba kuya kubakho "i-bleisure" eninzi, eya kubona abantu besongeza izinto zeholide kuhambo lwabo lomsebenzi, wongezelela uHalliwell.
UHarold Goodwin, ingcali yezokhenketho enoxanduva lwe-WTM, uthe icandelo leenqwelomoya liya kufuneka lilawulwe, ngaphandle kokuba linqumle indawo yalo yekhabhoni, walumkisa.
Njengoko amanye amacandelo e-decarbonise, uphapho lwehlabathi luya kuba sisixa esikhulu sokukhutshwa kwezinto ezikhutshwayo, ukunyuka ukuya kutsho malunga ne-24% ngo-2050 ukuba iimeko zangoku ziyaqhubeka.